कस्तो अवस्थामा जान्छ सांसद पद ? यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर गएका सांसदहरु कारबाहीमा परेका छन् । नेकपा भंग भएर माओवादी ब्युँतिँदा पनि पार्टीमा नफर्किएका सांसदहरुलाई माओवादीले कारबाही गरेको हो ।
उता, एमाले अध्यक्ष ओलीले माधवकुमार नेपालसहित एमालेका चार नेतालाई ६ महिना निलम्बन गरेका छन् । निलम्बनको पत्रमा ‘ओलीले सांसद पद बाँकी नै रहेको छ भनेर तर्साउन खोजेको’ नेता नेपालले टिप्पणी गरेका छन् । मंगलबार वाग्मती प्रदेशको समानान्तर कमिटी गठन गर्दै नेता नेपालले सांसद पद जान्छ भनेर आफूहरु नडराउने बताएका थिए ।
संघ, प्रदेशमा निर्वाचित सांसदको हकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ मा व्यवस्था गरिएको छ । दफा ३१ मा संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्यले सांसद पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उमेदवार भई निर्वाचित भएको हो, त्यो दल त्याग गर्न सक्ने÷नसक्ने उल्लेख छ । तर, दफा ३१ को (१) अनुसार सो अवधिमा दल त्यागे, दल त्यागेको मितिदेखि सांसद पद स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।
ऐनमा पार्टीले लगाएको ह्वीप उल्लंघन गरेमा पनि दल त्याग गरेको मानिने उल्लेख छ । संसदीय दलको नेताको निर्देशनबमोजिम दलको सचेतकले आफ्ना सांसदलाई पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ  । सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा, वार्षिक बजेट पारित गर्दा तथा राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको अन्य कुनै विषयमा मात्रै त्यस्तो निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ  ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी दफा २८ मा त्यस्तो निर्देशन संसदीय दलका प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ । ह्वीप उल्लंघन गरेमा सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्छ । सोही विवरणका आधारमा दलको दफा ३२ (२) अनुसार केन्द्रीय समितिले त्यस्ता सदस्यलाई दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ । यसरी निष्कासित सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासनमा परेको मानिनेछ ।
यस्तो छ कारबाही प्रक्रिया
अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईका अनुसार कारबाहीका लागि स्पष्टीकरणको मौका दिइनेछ । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए दलले कारबाही गर्न सक्नेछ । “यी जुनसुकै अवस्थामा पनि पार्टीले स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्छ । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भएन भने त्यस्तो निर्णय उल्लंघन गर्ने सांसदहरुको विवरण सचेतकले दलको नेतालाई दिनुपर्छ । दलको नेताले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा राख्ने र बहुमतले दल त्याग गरेको निर्णय गर्ने,” उनी भन्छन् ।
कारबाही गरेको सूचना संसद् सचिवालयलाई गराउनुपर्ने हुन्छ । “त्यसको सूचना संसद् सचिवालयलाई गराउनुपर्ने हुन्छ । संसद् सचिवालयले सभामुखलाई जानकारी दिएपछि सभामुखले त्यसको १५ दिनभित्र बैठक चलेको भए बैठकमा पढेर सुनाउनुपर्छ । नचलेको भए सूचना पाटीमा सूचना टाँस गर्नुपर्छ,” भट्टराईले भने ।
संघीय संसद्मा यसरी हुन्छ पद रिक्त
संविधानको धारा ८९ मा संघीय संसद्को पद पाँचवटा अवस्थामा रिक्त हुने उल्लेख छ ।
८९. स्थानको रिक्तता : देहायको कुनै अवस्थामा संघीय संसद्को सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछ–
(ग) प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल वा राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि समाप्त भएमा,
(ङ) जुन दलको उमेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दलले संघीय कानुनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा,
पोखरा । एक हप्ता अघिसम्म बलियो देखिएको गण्डकी सरकार अहिले धरमरमा परेको छ । सत्तासारथी माओवादी केन्द्रका आन्तरिक मामिला तथा... ५७ मिनेट पहिले
काठमाडौं । शुक्रबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच मञ्चमै भनाभन भयो । कर्मचारी युनियनको राष्ट्रिय भेलाको... १ घण्टा पहिले
काठमाडौं । नेकपा एमालेको खनाल-नेपाल समूहले शत्रुध्न महतोलाई प्रदेश २ को संसदीय दलको नेता बनाएको छ । उक्त समूहले आइतबार... २ घण्टा पहिले
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठक सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल विना नै बसेको छ ।... २ घण्टा पहिले
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘लाज पचाएर’ पदमा बसिरहेको टिप्पणी गरेका छन्... ३ घण्टा पहिले